ASTAAMAHA AASAASIDA DACHA - WARARKA
Meelaha banaanbaxa si ay ula kulmaan dhammaan filashooyinka milkiilayaasha, waxay u baahan doonaan naqshad karti leh. Tani waa meel aan rabno inaan nasasho ka qaadno magaalo qaylin ah, oo ka shaqeyso beerta iyo sariiraha beerta.
Sida loo qalabeeyo dhulkaaga, si ay wax walba u raaxaystaan, maangal ah oo raaxo leh? Tani waa nooc ka mid ah sayniska. Ama art? Iyo midka kale iyo kan kale. Oo marka hore waa inaad fahantaa aasaaska qaab-dhismeedka habboon, ka hor intaanad bilaabin inaad ku nadiifiso dhulkooda.
Sidee ayay u bilaabantaa?
Qarsoodi u ah guusha ganacsi kasta - habka saxda ah.
Xaaladeena, ka hor inta aanad qorsheynin dacha (iyo qorshooyinka, sida caadiga ah, Napoleonic), waa lagama maarmaan in la qiimeeyo fursadaha.
Taasi waa, bilawga, waa in aan samaynaa falanqaynta dhulkayaga - taas oo dhab ahaantii haysanno?
Ka dib markii qiimeyn marxaladaha marxaladaha lagu sameeyo ee guryaha, waxaan ka qaban karnaa qorshaha goobta - halka laga heli doono.
Halkan, maskaxda ku siin habka fikradda: waxaa ka wanaagsan inaad dhisato guri qaybtan ka mid ah, si ay u jiifiso beerta ubax ee ku xiga, iyo in yar oo dheeraad ah - orchard a. Hase yeeshee tani maaha wax aan jeclaan lahaa inaan ku rido goobta!
Laakiin ka hor inta aan la qorsheynin waa lagama maarmaan in la sameeyo qiimeynta dhulka, iyada oo la tixgelinayo dhowr arrimood.
Qodobbo qiyaasood ah oo ku xeeran dhulka hoostiisa
Terrain. Haddii dhulkiina uu leeyahay qaababka gargaarka ka duwan, waa in la tixgeliyaa. Xiiqda badani ma ahan xalka ugu fiican ee dhismaha guri. Farqiga dhererka waxaa loo isticmaali karaa rikoodhada alpine iyo biyaha. Nashqada muuqaalku waxay tixgelinaysaa dhamaan sifooyinka gargaarka.
Foomka Qaabka. Qorshahaaga dhulku wuxuu yeelan karaa qaab kale - geometric qaab qaab wareeg ah ama leydiin, ku wareegsan, sare, u egtahay warqadda G, T ama P. Dabcan, qaabeynta goobta waxay noqon doontaa mid ka duwan, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad si macquul ah u isticmaasho dhulka oo dhan, ha iloobin meelaha hoose.
Qorshaha dhulka. Maxaad u ogaaneysaa macluumaadka ku saabsan nooca carrada iyo acidity? Waa muhiim in la doorto dhirta aad ku kori doonto goobtaada. Inta badan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero - dalbashada ciidda dabiiciga ah, bixinta peat ama chernozem, iyo dalbashada bacrimin goobaha beerto mustaqbalka.
Maamulada degaanka ayaa ka heli kara khariidad khaas ah oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan ciidda dhulalka. Shaybaarada khaaska ah waxay kaa caawin kartaa falanqaynta ciidda. Dadka leh qaar ka mid ah goobaha dalka, sida ay yiraahdaan, iyo shaarib. Waxay leeyihiin xirfado kuu oggolaanaya inaad si madaxbannaan u falanqeeyaan ciidda.
Heerka biyaha hoose.
Tani waa arrin muhiim u ah qiimeynta goobtaada, taas oo muujinaysa baahida loo qabo dheecaan.
Halkee laga helayaa macluumaadkan?
Waxay ku jirtaa codsiga muwaadiniinta ay soo saartay waaxyaha dhismaha iyo qorshaynta magaalada ee degsiimooyinka.
Waxaa jira xulasho kale. Xilliga xagaaga, cimilada qallalan, waxaad u baahan tahay inaad marineyso dhulka 3 ilaa 4 qoto dheer oo ah 2-mitir. Heerka biyaha ee iyaga ayaa la hubiyaa todobaad kadib. Nidaamka dheecaanku waa inuu qalabeeyaa haddii masaafada u dhexeysa heerka ciidda iyo biyaha uu ka yaryahay 1 mitir.
Dabaylaha dabeecadda. Cimilada hawadu waxay waxyeello u geysataa dhirta beerta. Goob kasta waxaa lagu gartaa dabaylaha jihada iyo xawaare gaar ah. Waxaad ku ogaan kartaa adoo la xiriiraya adeegaaga cimilada ee degaankaaga. Waxaa laga yaabaa in beerta mustaqbalku ay u baahan tahay ilaalin ka timid, waana in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo dhulka.
Aagga iftiiminta. Sidee bay hantidaadu kuugu xirantahay marka la eego dhibcaha wadnaha? Meelaha ay yihiin meelaha ugu ifinta, iyo meedkee? Dhamaan arrintani waxay u baahan tahay in la caddeeyo horey si loo qorsheeyo meelaynta dhismayaasha, beerashada dhirta, habaynta goobaha madadaalada.
Noocyada lagu ciyaaro waddanka
Qorshaha Dacha - xayawaankaaga, waa meesha aad ku riixi lahayd maladaada iyo awoodaada hal abuur leh. Xitaa waxaad ku iman kartaa qaabka naqshadeynta. Laakiin, haddii aadan ahayn khabiir ku takhasusay, markaas natiijadu way adag tahay in la saadaaliyo. Waxaa laga yaabaa inaad ka sii fiican tahay inaad ogaato waa maxay qaababka ugu weyn ee qorshaynta?
Dabeecada caadiga ah (joomatari)
Nuxurka qaabka magaciisa - walxaha muuqaalka waxaa si adag loo geeyaa joomitir ahaan, sida haddii uu ku habboon yahay taliyaha. Aad ayay ugu habboon tahay aagagga uu dhulku ku yaal. Dhirta ayaa lagu beeray qaab siman, qaab ah wareega, leydiin, dheeman, qaab shaambe ah, si fiican u eeg.
Qaabka ayaa lagu gartaa astaamaha - marka sifooyinka muuqaalka ah ee qaabka sariiraha ubaxyada, balliyada, sawirada beerta, sariiro waxay ku yaalaan labada dhinac ee xajmiga weyn.
Habka muuqaalka (sawir)
Habkani wuxuu leeyahay xorriyad iyo dabiicad. Jidadka waxay noqon karaan dabaysha, balliyada, sariiraha ubaxa iyo xataa sariiro beerta ah - sawir.
Dabeecadda muuqaalku waxay ku habboon tahay aagagga leh dhul aan caddaalad ahayn - kala duwanaanta kala duwan, durdurrada, dooxooyinka.
Style isku dhafan
Tilmaamahan qaab-dhismeedkani waa mid isku-dhafan iyo xoriyad. Waxay u ogolaataa farsamooyinka isku-dhafan ee dabiiciga ah ee qaabka caadiga ah iyo muuqaalka sawirka. Habka waa ku haboon yahay haddii dhulku leeyahay meel ka duwan.
Qorshaha naqshadda dhismaha
Qorshaha qorshaynta (oo lagu qaato BTI) wuxuu ubaahanyahay in loo wareejiyo warqad garaaf ah.
Heerka ugu sarreeya waa 1 illaa 100.
Kadibna waa inaad beerta u jebisaa jaranjarada.
Baaxadda mid kasta waa 1x1 cm, taasoo u dhiganta 1 mitir oo laba jibbaaran oo dhul ah.
Hadda, sii gal sawir waraaqda iyo jarida dhammaan walxaha boggaaga - guriga, qubeyska, garaashka, gawaarida, beerta, gawaarida alpine iyo wixii la mid ah. Ku dhaji dhammaan tirooyinkan qorshaha kuna wareeji, adigoo dooranaya meesha ugu fiican.
Go'aami meesha ay ku yaalaan xagaaga xagaaga ee kuxiran dhibcaha wadnaha. Dhirta Beeraha waa in la qorsheeyaa dhinaca koonfureed. Qorshuhu wuxuu noqon doonaa mid muuqaal ah haddii aad isku dhajiso tirooyin waraaqo leh oo muraayad ah qaar ka mid ah sifooyinka muuqaalka ah ee caaga ah.
Sababta oo ah dadaal aad u badan oo ku saabsan horumarinta qorshaha ah haddii aad ku martiqaadeyso khabiiro si loo hagaajiyo goobtaada? Iyo si ay ula xiriiraan iyaga si kaamil ah iyo si ay ula socdaan shaqadooda.
Natiijo ahaan, qorshe majiraan ayaa la sameeyaa, oo ay ka mid yihiin:
meesha dhamaan dhismayaasha ku yaal goobta: guriga, garaashka, qubayska, barnka, gaas;
joogitaanka nidaam dheellitiran;
boodhka, barkadda, balli, dooxa;
qiyaasta xisaabinta kharashka nooc kasta oo shaqo ah.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah mashaariicda naqshadeynta ee meelaha miyiga ah. Waa faa'iido leh in la baro iyaga, iyo si lama filaan ah waxaad dooneysaa inaad soo amaahato qaar ka mid ah faahfaahinta ugu fiican ee naqshadeynta.
Waxaan ku dhex marnay qodobbada muhiimka ah ee qorshaynta waddanka. Caawimadani ha u ogolaato inaad fasax ka dhigto meel aad u fiican oo raaxo leh.